Xaguu ku dambeeyay El Hadji Diouf - BBC News Somali
Xaguu ku dambeeyay El Hadji Diouf
26 Juunyo 2017
El Hadji Diouf ayaa hadda degan kana shaqeeya dalkiisa Senegal
El Hadji Diouf halyay ayuu ka yahay Senegal. Meelkaste oo uu istaagana waxaa ku soo xooma taageereyaal isugu jira dhallinyaro iyo waayeel.
Dadkiisa ayaa wali abaal uga haya siddii wanaagsanayd ee uu uga soo dhalaalay intii uu socday Koobkii Adduunka ee 2002dii lagu qabtay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed.
Laakiin England markay timaado waxaa lagu xasuustaa dabeecadihiisii layaabka lahaa si ka badan sida loogu xasuusto xirfaddiisii kubadda.
Sifadaas ayaa la socotay intii uu u ciyaarayay kooxaha Ingiriiska isaga oo u soo saftay Liverpool, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers iyo Rangers.
Diouf ayaa marar badan isku taagi jiray garsooreyaasha iyo ciyaartoyda ay is hayaanba.
Laakiin hadda ciyaarihii wuu ka fariistay, waayihiisii ayuuna nooga sheekaynayaa
'Guuldarrada kuma fiicni'
"Libaax ayaan ahay, guuldarrada waan ku xumahay taasina khalad ma aha," ayuu yiri Diouf oo ka hadlaya qalqaalinimadiisii ciyaaraha.
"Sumcad ayaan leeyahay waxaana doonayaa in ay dadku i ixtiraamaan.
Diouf oo dib ugu laabtay magaalad Dakar ee caasimadda u ah dalka Senegal ayaa sheegay in markasta si khalad ah loo fahmi jiray markii uu ka ciyaari jiray England.
Wuxuu yiri "way sahlantahay in la i bartilmaameedsado. Way sahlan tahay in la iga hadlo El Hadji Diouf ana waan u ogolaaday laakiin qalbigayga ayaan ogahay oo qof fiican ayaan ahay. Qoyskayga ayaa i yaqaanna, bulshadayda ayaa i taqaanna, qaaradayda ayaa i taqaanna in aan qof fiican ahay taas ayaana ah arrinta oogu wanaagsan. Intaas wixii ka soo harana dhibaatadayda ma aha.
Inkastoo uu is difaacay haddana, Diouf wuxuu qirtay in uu waxyaabo aan wanaagsanayn sameeyay.
Waxaan waydiinay tusaale ahaan sababta uu candhuuf ugu tufi jiray ciyaartoydii ay is hayeen: wuxuuna ku jawaabay "Waxaa laga yaabaa in ay i dhaheen waxyaabo aanan rabin in aan maqlo. Arrintas waan sameeyay, waa la igu ciqaabay haddana way dhammaatay."
Gerrard waligii waxba uma qabanin dalkiisa
Xiddigan u dhashay dalka Senegal waxay marar badan goradda isla galeen ciyaartoyadii ay ka wada tirsanaayeen Liverpool sida Jamie Carragher iyo Steven Gerrard.
Steven Gerrard iyo Diouf ayaa kooxda Liverpool ka wada tirsanaa 2002 ilaa 2004tii
Ilaa iyo maantadan Diouf iyo Gerrard murankooda waxaa lagu wariyaa warbaahinta. Maxay tahay dhibaatada raggan u dhexeysa?
"Wax dhib ah anigu uma qabo," ayuu yiri Diouf oo intaasi sii raaciyay "Gerrard waa nin sumcad leh, anigana sidoo kale"
" Stevie Gerrard waa ciyaaryahan wanaagsan. Taageerayaasha Liverpool aad ayay u jecel yihiin, balse ma jiro wax uu u qabtay dalkiisa. Aniga waxaan ahay 'Mr El Hadji Diouf, Mr Senegal balse isagu waa Mr Liverpool, waxaadse ogsoontahay in Senegal ay ka weyntahay Liverpool. Wuxuu u baahan yahay inuu intaa ogaado.
Diouf wuxuu hadda danjire maamuseed u yahay dowladda Senegal. Wuxuu la taliye gaar ah oo dhinaca ciyaaraha ah u yahay madaxweyne Macky Sall. Wuxuu sidoo kale leeyahay jariirad ka hadasha arrimaha ciyaaraha.
" Nolosheydu waa ciyaaraha balse dowladdu iyada kaligeed wax kasta ma qaban karto. Waxay kaalmo uga baahan tahay dadka aniga oo kale ah," ayuu yiri Diouf.
"Madaxweynaha wuu i aaminsan yahay, waana sababta markii aan ka fariistay ciaayaraha uu iigu yeeray, maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay in dhallinyardu ay i aaminsan yihiin oo aan tusaale ay ku daydaan u ahay."
Mar la weydiiyay inuu daneynayo inuu door ku yeesho ciyaaraha ayaa wuxuu sheegay in uu awoodiisa isugu geyn doono horumarka dalkiisa — balse wuu ka gaabsaday inuu ka hadlo inuu siyaasadda geli doono iyo in kale.
Xigashada Sawirka, El Hadji Diouf
Madxweyne Macky Sall ayaa Diouf ka dhigtay la taliyihiisa dhanka ciyaaraha
'Senegal waxaan ku qornay khariidadda caalamka'
Xiriirka kubadda cagta Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo CAF ayaa labo jeer gudoonsiisay ciyaaryahanka ugu wanaagsan Afrika, Diouf ayaana ka mid ahaa xulkii Senegal ee ka mid noqday siddeeda kooxood ee ugu dambeeya intii uu socday Koobkii Adduunka ee 2002dii, iyaga oo ka badiyay Faransiiska oo koobka difaacanayay.
"Faransiiska ayaa na gumaystay. Ganacsiyada dalkanagana intooda badan waxaa maamula dad Faransiis ah "marka hal ku dhaggu wuxuu aha ka badiya ama garaaca, arrin wayn ayayna noo ahayd.
Wakhtigaas ayuu ku tilmaamay guushii ugu waynayd ee uu xirfaddiisa kubadda ka gaaray, isaga oo la simay guushii uu Maradona gaaray markii uu ku guulaystay Koobkii Adduunka isaga oo la qaaday dalkiisa Argentina.
"Khariidadda caalamka ayaan ku qornay Senegal". Ayuu yiri. "Ciyaaraha Adduunka ka hor cidina ma aqoonin Senegal, Ciyaarihii Adduunka ka dibse qof kaste wuxuu rabay in uu ogaado meesha ay dunida kaga taallo Senegal.
"Wixii uu Maradona u qabtay dalkiisa ayaan u qabtay Senegal" waxaan ka mid ahaa raggii ugu miisaan cuslaa Koobkii Adduunka ee 2002dii.
Koobkii Adduunka ee 2002 ayaa guul wayn u ahayd El Hadj Diouf oo dhexda ka muuqda
"Xuseen wuxuu naftiisa u gubay laaluush ay boolisku weydiiyeen awgeed"
Wiil 29-jir ah oo u dhashay dalka Uganda isla markaana ku shaqeysan jiray mooto ama dhug-dhugley ayaa iku dhintay gudaha saldhig boolis oo ku yaal koonfur galbeed dalkaasi ka dib markii uu isgubay oo uu dab is-qabadsiiyay.
Rusty Hutson Jr wuxuu madax ka yahay shirkadda tamarka Mareykanka ee sida weyn u koreysa, ee lagu magacaabo Diversified Gas & Oil.